25 akụkọ dị iche iche na-abụghị eziokwu kama akụkọ banyere akụkọ egwuregwu
Ị chetụla echiche banyere onye kere ụdị egwuregwu dị iche iche taa? Okwu na-akpali mmasị, nri? Ma mgbe ịmalite ịbanye na ya, ọ ga-abụ ọbụna ihe na-adọrọ mmasị karị, n'ihi na ọdịdị nke ụfọdụ egwuregwu - n'ụdị nke anyị na-ahụkarị ha - bu akụkọ ndị na-adọrọ adọrọ n'ihu!
Na ọdọ mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri nke mbụ na-egwu n'èzí. Egwuregwu ahụ na-adịkarị na Northern Europe na France na ihe ọ pụtara dị nnọọ ka croquet oge a. Obere oge ka e mechara, a gafere ọdọ mmiri ahụ n'ime ụlọ ahụ - bọọlụ ahụ malitere ịkwọ ụgbọala n'elu tebụl na-ahụ akwụkwọ mkpuchi pụrụ iche na-egosi ahịhịa. Kama ịchọta ya, a na-eji akpa anụ. Ma mgbe ahụ, a kpebiri iji ihe mara mma dochie ha, ebe nnukwu isi ahụ na-esighị ike iji rụọ ọrụ.
Ruo narị afọ nke iri na asaa, otu obere okwute na-arụ ọrụ nke bọl na egwuregwu ahụ, kama nke a, e nwere alaka. Eketụbeghị ọgwụ ruo narị afọ nke XIX, ruo mgbe ọ gbanwere iwu ndị ahụ, ọganihu nke nkà na ụzụ adịghịkwa ekwe ka ịkwalite ngwa ngwa.
Ihe ndị American ndị egwuregwu. N'ime ya malitere ịkụgharị ndị nnọchiteanya nke Algonquin. Mkparịta ụka Lacrosse bụ ihe dị mkpa, nke 100,000 na 100,000 weere òkè. Ọchịchị ahụ mere naanị otu ihe: enweghi ike imetụ bọl ahụ. Ụdị aha nke oge a na French, bụ ndị na-ahụghị anya otu n'ime ihe ndị a.
Akụkọ ya na-alaghachi azụ n'oge oge ochie nke ọdịda anyanwụ. Na mbido, a na-akpọ egwuregwu ahụ naanị ịke. Na 1600s, dị ka iwu ndị ahụ si dị, ndị egwuregwu ahụ dị nnọọ mkpa iji tie égbè ahụ ma ghara ikwe ka ọ daa n'ala. Egwuregwu na-arụsi ọrụ ike na British ndị bi India. N'ebe a, e nwere iwu ọhụrụ na aha nke oge a - badminton.
"Ndị mmadụ" football nwere mmasị n'ọgba aghara n'oge. Ugboro obodo na-emekarị ya. Ikere òkè na egwuregwu ahụ nwere ike ịbụ ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke ndị sonyere ya, ma kama nke bọl ahụ, e ji ụzụ ezì fụrụ akpụ.
Egwuregwu a pụtara na narị afọ nke isii BC. N'eziokwu, mgbe ahụ ọ bụghị egwuregwu, kama ọ bụ ọzụzụ maka ịnyịnya. Ndị agha na-agba ọsọ n'oge egwuregwu ahụ na-egwu egwu. Ka oge na-aga, "ọchị" na-aghọwanye ewu. Ọ malitere inwe mmasị na ụwa dum. Mgbe egwuregwu ahụ ruru ndị India, ndị isi Britain jiri aha nke oge a - "polo", nke pụtara "bọl" n'asụsụ Balti.
7. Ịkụ efe
Mgbọrọgwụ ya laghachiri n'oge oge ochie nke Ijipt. Ụdị egwuregwu nke oge a malitere na Germany, ọ bụbu ihe omume okpukpe. A na-ehichapụ mmehie nke ndị na-eme mkpọtụ nke chọọchị.
Na 50s, Californian surfers chọrọ n'ezie ịkwaga mbadamba ha iji kpoo ala. Mgbe ahụ, mmepe nke skateboards malitere. Naanị onye dere akwụkwọ nke oge a bụ ihe omimi. Ruo afọ iri asatọ na ụma, egwuregwu anaghị adọrọ mmasị, mana n'ikpeazụ, ọ na-ebili elu na-enweghị atụ.
Ná mmalite, a kpọrọ egwuregwu ahụ "Mintonet". Onye mepụtara ya bụ William Morgan na 1895. Ọ chọrọ n'ezie ịme ụdị ngwakọta site na basketball, baseball, handball na tenis. Ná mmalite, ogologo netị ahụ dị mita 1.8, ruo n'afọ 1928, e nweghị iwu ndị ọchịchị na egwuregwu ahụ.
Ná mmalite afọ ndị 1800, ndị Indians Mikmak na-egwuri egwu hokkey, na-eji osisi na obere obere osisi. Nke nta nke nta, ụdị egwuregwu ọhụrụ ndị nwere mmasị na Canada. Ruo mgbe egwuregwu ahụ bịara dị ka anyị si mara ya, ihe ruru mmadụ iri atọ nwere ike ịga na ice n'otu oge ahụ, "ndị na-agbawa mmiri" ga-emecha ghaa na ice.
Ihe mbụ e kwuru banyere handball na-abịa na 600 BC. Ntakịrị oge, handball bụ otu n'ime ụdị ọzụzụ nke football na ihe nkiri ahụ. Naanị n'afọ 1917, egwuregwu ahụ ghọrọ egwuregwu dị iche iche, na 1972 e buru ụzọ gosi ya n'egwuregwu Olympic.
Nke a bụ egwuregwu oge ochie, aha nke ka dị n'etiti ihe ndị dị na Cro-Magnon oge. Ma, ọ malitere ịmalite ịrụsi ọrụ ike nanị n'afọ 1760, mgbe ndị agha Norwegian malitere iji ha mee ihe ngwa ngwa. N'ikwekọ na njem ahụ, ha gbara ndị iro ahụ. Ya mere a mụrụ biathlon, nke mbụ pụtara na Olympic na 1924.
Nke a bụ Joel Silver n'afọ 1968. N'afọ sochirinụ, ememme mbụ ahụ mere, nke abụọ n'ime ụmụ akwụkwọ weere òkè. Ka ọ na 1970, ndepụta nke iwu egwuregwu na-arịwanye elu, na 1972, Rutgers na Princeton na-egwu egwu na ya.
E kweere na a na-eme golf na Scotland, ma nke a abụghị eziokwu. Egwuregwu ndị na-eji mkpanaka na bọọlụ, e nwere ọtụtụ, nanị asụsụ Scottish ghọrọ onye a ma ama. Iwu ya - iji tụgharịa bọl n'ime obere oghere maka ọnụ ọgụgụ kachasị nke mkpali - ma ghọọ ndị isi.
Nke a bụ otu n'ime egwuregwu ndị kasị ochie, n'ihi na ndị mmadụ malitere ịchọpụta mmekọrịta ha na ndị aka ha ogologo oge. Obere oge e mesịrị, e kpebiri itinye ndị na-egwu ọkpọ na okpu. Ndị Gris na-ele egwuregwu a anya dị ka ihe kachasị dị ize ndụ ma na-ekwukarị na "mmeri nke onye na-egwu ọkpọ bụ ọbara."
16. Ụkpụrụ 1
N'ọsọ mbụ ahụ na 1887, naanị otu onye bịara, n'ihi na a ghaghị kagbuo asọmpi ahụ. N'elu asọmpi mbu nke ndi mmeri, ndi mmeri mepere ngwa ngwa nke ihe kariri kilomita 17.
Maka esemokwu nke telivishọn bụ ọgba aghara dị ọkụ. Ọ bụ ezie na e kweere na progenitor nke egwuregwu a bụ Major Walter Clopton Wingfield, e nwere ọtụtụ nkwenye na egwuregwu ahụ pụtara na mbụ. Ndị American Tennis Association dị adị kemgbe 1881.
18. Disc Goose
Echiche nke ime egwuregwu a bụ ezigbo egwuregwu na-abịa azụ na 1965. Ma mgbe ụfọdụ asọmpi, mmasị na ya kwụsịrị. Naanị na 1975, gọọmenti diski gụnyere n'ime World Frisbee Championship.
19. The knockout
Ala nna nke egwuregwu ahụ bụ Africa, ebe ọ pụtara ihe karịrị afọ 200 gara aga. Ná mmalite, egwuregwu a dị nnọọ ize ndụ, n'ihi na ndị egwuregwu ahụ na-atụba ibe ha n'osisi dị elu. Ọ bụrụ na mmadụ adaa na mberede, ndị agha ya na-eji aka ya agba ọsọ iji gbachite ọnụ ya, ebe ndị iro ahụ malitere ịkwatu nkume dị iche iche.
Ụdị egwuregwu a dị ntakịrị ka hockey, ma ọ bụ naanị ndị na-adịghị mma na-eyi akwa, ma na-atụgharị bọl. Ekwenyere na egwuregwu ahụ pụtara na Kanada. Ka oge na-aga, ọ gara Minnesota. Egwuregwu mbụ e mere na 1966.
21. Egwuregwu bọlbụ
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, onye nkụzi agụmakwụkwọ bụ James Naismith mepụtara basketball na 1881 ka ụmụ akwụkwọ wee ghara ịda mbà n'oge ọzụzụ oyi na nkwonkwo. Ọ bịara na egwuregwu nke ga-ejikọta ihe nke rugby, lacrosse, football, weere nkata ole na ole site n'aka onye nchịkwa dị n'ógbè ahụ, kpọgidere ha elu wee bido iwu ya. Ihe mepụtara ahụ wee bụrụ ihe ịga nke ọma ma gbasaa ngwa ngwa gburugburu ụwa. Na iwu basketball, nke Naismith mepụtara, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ bụghị mgbanwe.
Ọzọ "egwuregwu" oge ochie, nke sitere na Polynesia afọ atọ gara aga. Ndị na-akụ azụ na-eji mbadamba nkume ndị ahụ - ya mere, ha rutere n'ikpere mmiri mgbe mmechi a rụchara nke ọma.
23. Egwuregwu American
A ngwakọta nke egwuregwu rugby na football pụtara na mahadum America na narị afọ nke XIX. E wepụtara egwuregwu "uche" na Walter Camp, bụ onye duuru Inter-College Football Association ma wee nweta iwu ikpeazụ.
24. Egwuregwu Baseball
Ruo ogologo oge, a kwenyere na baseball invented Abner Doubleday, mana n'eziokwu, egwuregwu ahụ pụtara na mbụ, wee soro ya na ụmụ ya. New York Knickerbockers Baseball Club kere na 1845. N'otu oge ahụ, Alexander John Cartwright kwadoro iwu nke egwuregwu ahụ.
Akụkọ banyere egwuregwu ahụ agaghị eru 100 afọ, ma e nwere ihe mere ị ga-eji kwere na ndị mmadụ malitere ịkụ bọl ahụ na mbụ. Ọbụna na narị afọ nke atọ BC ndị so n'òtù ndị agha China nọ na-akpọ bọl ahụ, nke bụ n'eziokwu bụ bọmbụ jupụtara na nku. Ndị na-egwu egwu apụghị inyere onwe ha aka, ma kpọọ ntụrụndụ a "Tsu Chu".
14 ihe oriri nke a ga-eri mgbe mgbatị
Na-anakọta agba niile nke egwurugwu na efere gị!
13 ngwa nri ngwa ngwa na mmetụta nkwụsị
20 ngwaahịa na-adịghị emetụta ọnụ ọgụgụ ahụ, ọ bụrụgodị na ha nọ n'abalị
28 foto na-egosi na ọnwụ dị arọ bụ ọrụ nzuzu
30 ihe mgbagwoju anya a na-apụghị ịkọwapụta foto na-ese onyinyo!
10 ọtụtụ ndị na-agba ọsọ n'oge a
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na ahụike, anaghị eri nri ndị a!
20 Ihe mere I nweghi ike iwepu ibu
"Mmiri nke Ndụ": gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-eji mmiri mee ihe ọṅụṅụ niile
Na-eri kwa ụbọchị otu banana, ọ ga-azọpụta ndụ gị!
Ngwa iri na atọ ga-eri nri tupu ị mụta ọzụzụ
Foto kachasi ike nke Olympiad Rio 2016
Achịcha na-egbu nri na cheese
Oge agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ - ihe ndị na-akpali mmasị na ọdịdị na n'ime ụlọ ọrụ
Olee otú ị ga-esi ghọọ nwa agbọghọ mara mma?
Uru nke mmanya
Bow-slime - uru bara uru
Kedu ihe ị ga-eyi n'osisi n'oge oyi?
N'ihu - ọgwụgwọ n'ụlọ
India yabasị - vodka tincture
Kedu otu esi eri nri osisi a iji mebie?
Enwere ike injinia ike?
Kuki achicha «Azụ»
Ọgwụgwọ Shockwave - egosi na contraindications
Nsogbu iri na-eche ndị mmadụ ihu na-adịghị mma
Ndị na-ahụ maka akwụkwọ akụkọ n'ime ime ụlọ ahụ
Balm maka nku anya
Nkịtị Oriental - nkọwa nke ụdị
Ịbawanye ụbụrụ n'ime afọ ime
Akpụ nkịta nkịta
Kedu otu esi belata nrụgide intracranial?
Pasta na ọkụkọ na mushrooms - ihe kacha atọ ụtọ, ntụziaka dị mfe ma dị iche iche maka nri dị ọkụ
Encephalopathy na-ekpuchi anya nke ogo nke abụọ